Cochinchina Archives - Dhulka Barakaysan ee Daraasaadka Vietnam
Qeybta LA COCHINCHINE waxaa ka mid ah maqaallo soo bandhigaya wadanka Cochinchina muddadii gumeysiga Faransiiska.
LAGU XUYEN - Cochinchina
Gobolka Longxuyen waxaa xuduudo ku leh gobollada Chaudoc, Rachgia, Cantho, Sadec iyo Tanan, waxayna kujirtaa dusha sare ee 120.432 ha qeybta galbeed ee Cochin-China.
Gobolka Tayninh wuxuu leeyahay dhul ballaadhan oo dhererkiisu yahay 450.000 hektar, wuxuuna xuduud u yahay waqooyiga iyo galbeedka Cambodia, koonfurta oo ku taal gobollada Giadinh, Cho Lon iyo Tanan iyo bariga wabiga Saigon.
Gobolka Baria wuxuu ku yaal bariga Cochin-Shiinaha.
Gobolka Bentre waxaa aasaasay laba jasiiradood: jasiiradda Minh, oo ku taal inta u dhaxaysa webiyada Co Chien iyo wabiga Hamluong, waqooyiga waqooyiga waxaa leh Vinhlong, iyo jasiiradda Bao, inta u dhexeysa Hamluong iyo Balai.
Magaalada ugu weyn gobolka Hatien waxay ku taalaa albaab laga galo meel cufan, Gacanka Siam, waqooyi-galbeed xeebta Cochin-China, iyo 6km dhinaca xadka Kambodiya.
Gobolka Rachgia, waxaa deggan 235.000. Madaxa magaalada Rachgia ama tuulada Vinh Than Van.
Gobolka Baclieu wuxuu ku yaalaa inta u dhaxaysa 8 ° 30 iyo 9 ° 30 latitude waqooyiga, iyo 102 ° 20 iyo 104 ° longitude dhinaca bari.
Gobolka Travinh waxaa waqooyiga ku xigeya gobolka Co Chien.
Gobolka Soctrang wuxuu leeyahay dhul 238.000 hektar ah qayb walbana waxaa loo isticmaalaa in lagu isticmaalo, gabi ahaanbana wuxuu ku hoos jiraa beerashada bariiska.
Waxay ku taal waqooyiga-galbeed ee Cochin-China, gobolka Chaudoc waxaa ku xidhan woqooyi iyo galbeedka Boqortooyada Cambodia.
Comments Off Magacyada Vietnam
Comments Off on BA RIA - La Cochinchine
CHOLON - Cochinchina - Qaybta 1aad
Comments Off on CHOLON - Cochinchina - Qaybta 1
Booqashada Maanta: 221
Booqashooyinka Maalmihii 7 ee ugu dambeeyay: 3,142
Guud ahaan Wadarta: 286,037